Omelette fromazy sy fromazy | Recipe ao an-dakozia
Renee | | Entries mafana, Resipeo tsotra
Rehefa tsy maintsy manomana sakafo ao anatin'ny dimy minitra aho dia matetika no manapa-kevitra amin'ny safidy roa, na manamboatra sandwich na omelette. Mahalana ny olona tsy mahalala ny fomba fanomanana omelette, na dia tsy mitovy fomba fiasa aza isika rehetra. Androany dia hanao ny super express araka ny fanaoko aho, antenaiko fa ity fomba fahandro ity dia hanompo anao rehefa tsy te ho ao an-dakozia be ianao. Omelettes dia azo fenoina akora isan-karazany, androany nanapa-kevitra ny ham sy fromazy aho.
Fotoana fiomanana: 5 minitra
INGREDIENTS (ho an'ny olona 1)
Crème 1 sotrokely
Silaka 1 silaka
Fromazy 1 silaka
tsimoka tanora sy katsaka
Nokapohinay tamin'ny crème ny atody, ary asio sira sy dipoavatra.
Afanaina menaka manitra ao anaty lapoaly ary ampio ireo atody nokapohina. Avy eo dia alaminay eo afovoany ny fromazy sy ny ham.
Rehefa apetraka ny atody dia aforintsika izy, ampandalovintsika amin'ny antsasany ny antsasany. Raha tiantsika ny fisotroan-dronono dia esorintsika avy hatrany izany amin'ny aforeto azy. Tiako ho maina kokoa izy io, ka handao azy isika mandritra ny segondra vitsy.
Apetrakay eo ambony lovia izany ary arahinay miaraka amin'ny salady tsimoka sy katsaka.
Azonao atao ny manisy sombi-mofo amin'ny lafaoro iray ihany ary manendasa azy amin'ny lafiny roa. Avy eo dia alaminao eo ambony lovia io ary apetraho eo ambonin'ilay mofo ny omelety.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: firosoana » namany » Entries mafana » Omelette fromazy sy fromazy
Voamaso miaraka amin'ny atody
Camembert fromazy fondue